Izibongo – iAfrika
Tags Izibongo, Mabhida
Tags Izibongo, Izigodi
Izithakazelo ziyigugu nendlela lokuzigqaja kulowo osuke ebizwa ngolibo lwamaqhawe akubo. Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge maphakathi inhliziyo uzibone izihlathi zivakashela izindlebe. Zonke izizwe zabeNguni zinezibongo. Izibongo lezo zihambisana nezithakazelo. Izithakazelo zehluka ngokuthi zona zihambisana nesibongo sabantu abanenkaba yozalo. Izithakazelo lezi zisuselwa emagameni nasezibongweni zokhokho besibongo esithile. Uma … Read more
Tags Izibongo, Izithakazelo